October 3, 2020 346
बझाङमा करणी पछि ह त्या गरिएकी १२ वर्षिया सम्झना कामीका बुवा बिकास भारत’बाट आएका छन्। भारतबाट आएदेखि बिका’स चैनपुरस्थित एक सानो बन्द कोठाभित्र छन्।
जतिखेर पनि आँखाभरि आँ’शु आइरहन्छन्। रुँदै भन्दै थिए ‘छोरी जन्माउने सबै बुबा पापी हुन् । म पनि पापी बुबा हुँ। तीन हप्ता अगाडी मेरी छोरीले त्यता’बाट स्यान्डल ल्याइदिनु है बाबा भने’की थिइ।
स्थानीय शेर कामी दाइको हा:तमा स्यान्डल पठाएको थिएँ। मैले पठाएका स्यान्डल पनि नलगाइ छोडेर गइ मेरी छोरी। फूलजस्ती छोरी त्यो पापीले चटक्कै चुँ’डेर लग्यो। उसका कति सपना थिए सबै अ:धुरै रहे। छोरीलाई नदेखेको ४ वर्ष पुग्यो।’
छोरीको कर’णी र ‘ह’त्या रालाई कि त ‘फाँ’सी कि त आ जिवन जेलमा सडाए मात्रै मेरि छोरीले न्याय पाउँछ भन्दै छाती पिटिपिटी रोइरह’न्छन् विकास । सम्झना १२ व’र्षीया जेठी छोरी हुन्। त्यसप:छि ४ बहिनी र एक भाइ छन् सम्झनाका।
सम्झना सहित तीन बहि:नी बाजे बज्यैसँग थिए भने दुई बहिनी र एक भाइ भारतमा बुबा आमासँग थिए । विका:स गाउँमा गरिखाने वातावरण नहुँदा २०५८ सालमा भारत छिरेका थिए।
त्यसपछि एउ:टा छोरीको आँखा’मा स मस्या आउँदा धेरै खर्च भयो तर आँखा काम नलाग्ने गरी बिग्रीयो। दुखै दुख’ले भरिएको विकासको जीवनमा दैवले ठूलो ब्रज:पात पारिदियो। फूलको कोपि’ला जस्तै फक्रिन लागेकी सम्झना बुबा र भाइ’लाई नदेख्न पाएर यो संसारबाट विदा भइन्। – ताजा खबर
Prevऐश्वर्या जस्तै सुन्दरी ! धेरैले ऐश्वर्या नै ठाने, को हुन् त उनी ? हेर्नुहोस्
Nextजब ‘राम-नाम सत्य है’ भन्दै मुस्लिमले उठाए हिन्दु छिमेकीको शव (भिडियो सहित)